I-EA013 - I-OMG Wireless Emergency Care Alarm Call Button Alert System -500 + ft Ibanga Lokusebenza [2 in 1] - $ 250 - OMG Solutions
Izinketho zokuxwayisa zihlanganisa i-1. I-Sound + Light 2. Umsindo kuphela i-3. Ukukhanya Kuphela
Bright Ukukhanya kokukhanya kwe-LED iphelele kulabo abanokukhubazeka ukuzwa.
Ibanga lesistimu kuze kube I-500 + ft endaweni evulekile.
I-32 umculo / i-alamu imisindo yokukhetha (23 izaziso zomculo nezixwayiso eziphuthumayo ze-9), ukulawula kwevolumu yezinga le-3, nokusebenzisa ikhodi ye-16-bit ukuqeda ukuphazamiseka kwamanye amadivayisi.
Kulula ukusebenzisa izinkinobho ezimbili zekholi yocingo / isexwayiso sesiguli nomnakekeli - I-alamu ephuthumayo ye-ephuthumayo kubantu abadala noma abakhubazekile ukubiza usizo.
Mane ucindezele noma iyiphi inkinobho yokushaya ukuze wazise umnakekeli ngesamukeli esingenantambo - Ububanzi bohlelo obufinyelela kumamitha angu-500 endaweni evulekile.
Inkinobho yocingo ingagqoke njengendandatho, ithathwe ephaketheni, noma ibeke eceleni kombhede.
Inkinobho yekholi ukuvinjelwa kwamanzi.
Umamukeli wezinsizakalo ze-Slimline angadalwa ngodonga, abekwe eduze nomnakekeli, noma aqhutshwe ephaketheni.
Ukushaya ucingo lwezingane: Omama abafuna ukuzimela bezingane zabo kusukela ebuntwaneni abancane ngeke banqikaze ngoba badinga nje ukucindezela inkinobho ukuze uthole usizo.Ukwakha idivayisi: Kuyinto idivayisi yokubiza ewusizo kakhulu emndenini onabazali nezingane ezilele egumbini elihlukile. Ebusika, abazali bangacindezela inkinobho ngaphandle kokugqoka futhi bevuka.
Kufaka konke okudingekayo ukuze kusetshenziswe ngokushesha - Inkinobho eyodwa yocingo, owamukelayo oyedwa. I-receiver ne-transmitter enezinkomba zebhethri ephansi. Umamukeli owanikezwa yi-3 x AAA amabhethri (angahlanganisiwe); i-transmitter enikwe amandla nge-1 x CR2032 ibhetri (ifakiwe).
Ukushayela idivayisi yeziguli nabakhubazekile: Njengoba unakekeli womnakekeli akakwazi njalo ukuhlala neziguli noma abakhubazekile, yini okufanele yenze uma badinga usizo ikakhulukazi ebusuku? Bangathola ukunakekelwa ngesikhathi nangokucabangela ngaphandle kokukhala ngokucindezela nje inkinobho.
Ukushaya ucingo lwezingane: Omama abafuna ukuzimela kwezingane zabo kusukela ebusheni ngeke banqikaze ngoba nje badinga ukucindezela inkinobho ukuze uthole usizo.
Idivayisi yokuvusa: Kuyinto idivayisi yokubiza ewusizo kakhulu emndenini onabazali nezingane ezilele ekamelweni elihlukile. Ebusika, abazali bangacindezela inkinobho ngaphandle kokugqoka futhi bevuka.
Idivayisi yokunakekela abesifazane abakhulelwe noma abesifazane phakathi nenyanga eboshiwe ngemuva kokubeletha ingane: Bobabili abesifazane nabesifazane abakhulelwe ngenyanga eboshiwe ngemuva kokubeletha ingane badinga ukunakekelwa kwethu ngokucophelela. Sizokwenzenjani uma unina. owesifazane ogcinwe esitokisini noma amalungu omndeni akakwazi ukuhlala nabo ngaso sonke isikhathi? Ngokucindezela inkinobho kungakwazi ukuhlangabezana nesidingo sabo.
I-Melody imisindo yokukhethwa: Izingoma ze-23 nezixwayiso eziphuthumayo ze-9.
Imodi yokusebenza yokuzithandela: i-alamu kuphela; ukukhanya kuphela; ukukhanya ne-alamu
Isibonakaliso sebhethri esincane: Kukhona isikhumbuzi uma ibhethri iphansi.
Ukulawula ivolumu yezinga le-3: Ungayilungisa ngesidingo sakho.
Okulula ukusebenzisa: Kulula ukusebenzisa i-alamu / isistimu yokuqwashisa izinkinobho ezimbili zokushaya isiguli nomnakekeli - I-alamu ephuthumayo ekahle yabantu abadala noma abakhubazekile ukucela usizo - Mane ucindezele inkinobho yokushaya ucingo ukwazisa umnakekeli ngesamukeli esingenantambo - Ibanga lesistimu elifinyelela kumamitha angama-500 livulekile indawo.
Umsebenzi wokuphikisana ohlakaniphile: Ukusebenzisa i-16-bit encoding, ukugwema ngokuphumelelayo ukuphazamiseka phakathi komakhelwane.
I-Receiver ne-transmitter yonke inomkhumbuzi wamandla aphansi: Ukugwema amandla futhi abantu abakwazi ukuthola usizo ngesikhathi.
Umklamo oyingqayizivele: Idizayini engenamanzi kanye nedizayini yokulwa nokuwa, ukugwema abantu abakwazi ukuthola usizo lapho bewa noma kwenye ingozi.
Cindezela inkinobho yesamukeli "Signal" kuze kukhanye ukukhanya kwe-LED
Cindezela inkinobho yocingo olubomvu kanyekanye ukuze ubambisane nesamukeli (qiniseka ukuthi ususa ibhethri ye-battery battery protector ngokuvula inkinobho yocingo nge-screwdriver ehlanganisiwe)
Ukukhanya okubomvu kuzokhanya ukuze kuqinisekiswe ukubambisana okuphumelelayo
Umamukeli uzophuma ngokuzenzakalelayo imodi yokubhanqa
Uhlelo lulungele ukusebenzisa. Phinda inqubo uma inkinobho yocingo nomamukeli belahlekelwa uxhumano
Receiver Remote 2
Inkinobho yekholi x 1
Ukubuka okuphelele kwe-3864 Ukubuka kwe-5 Namuhla